Manchester City oo heshiis shaqsi ah la gaartay Kalidou Koulibaly – Gool FM
(Manchester) 06 Seb 2020. Shabakada “Italian football” ayaa xaqiijisay in maamulka Manchester City ay heshiis kama dambays ee shaqsi ah la gaareen daafaca reer Senegal iyo naadiga Napoli ee Kalidou Koulibaly, kaasoo ku saabsan shuruudaha qandaraaskiisa.
Kooxda reer England ee Manchester City ayaa isku diyaarineysa in Kalidou Koulibaly ay ka soo qaadato naadiga Napoli inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Magaca Kalidou Koulibaly ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo naadiga Napoli xagaagan, iyadoo ay xiiseyneyso kooxda Manchester City si ay ula soo saxiixato.
Haddaba Shabakada “Italian football” ayaa tilmaamtay in kooxda Manchester City ay ka shaqeyn doonto inay ku qanciso maamulka Napoli, sida ay ku dhameystiri laheyd heshiiska daafaca reer Senegal sida ugu dhaqsaha badan.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Kalidou Koulibaly uu ku heli doono heshiiska kooxda Manchester City qiyaastii mushaar dhan 12 million euros sanadkii, 9 million euros + 3 million oo gunooyin ah.
Yeelkeede, Manchester City ay u soo bandhigi doonto kooxda Napoli lacag dhan 70 million euros si ay ugu guuleysato adeega Kalidou Koulibaly.
Shabakada ayaa tilmaamtay in kooxda Napoli ay dooneyso 75 million euros si ay u iibiso daafaca reer Senegal laakiin City ayaa isku dayi doonta inay heshiis la gaarto kooxda ka dhisan koonfurta Talyaaniga, si ay u shaaciso heshiiskeeda saddexaad ee xagaagan kaddib Ferran Torres iyo Nathan Aké.